Vaovao - Mba hanatsarana ny fahombiazan'ny fipoahana bala, efa nisafidy ny abrasive mety ianao?
Mba hanatsarana ny fahombiazan'ny fipoahana bala, efa nifidy abrasive mety ianao?
Tifitra varirarakadia dingana mahazatra amin'ny fitsaboana amin'ny metaly. Ampiasaina be amin'ny casting, vy, workpiece struktural, faritra fanodinana vy ary indostria hafa. Miaraka amin'ny fanatsarana ny siansa sy ny teknolojia ary ny fampandrosoana mahery vaika ny famokarana, manana takiana avo lenta sy avo kokoa isika amin'ny kalitaon'ny fitsaboana, ny vidiny ary ny fahombiazany sns. izay misy ifandraisany amin'ny kalitaon'ny vokatra farany sy ny sandan'ny vokatra, noho izany dia nahasarika kokoa ny sain'ny olona.
☛Ny antony lehibe manimba ny fahombiazan'ny tifitra variraraka:
1. Ny kalitaon'ny abrasive ampiasaina amin'ny fipoahana fitifirana: toy ny karazana, refy, index index (hamafin'ny fiainana, havizanana) an'ny maratra, sns.;
2. Ny fahamendrehan'ny fizotran'ny fipoahana fitifirana: fotoana fohy, hafainganam-pandeha, fikorianana sns.
3. Ny fahamendrehan'ny fanjakan'ny milina famaohana: ny zoro voatifitra, fanjakana fisarahana, vokan'ny fanesorana vovoka, sns.
☛Ny fifandraisana misy eo amin'ny haben'ny sombin-javatra marokoroko sy ny fahombiazany:
Ny isan'ny abrasives narian'ireo fitaovana fanadiovana isaky ny ora isam-bolana dia lehibe sy avo roa heny amin'ny lanjany mitovy, ary ny fahombiazan'ny fanadiovana dia azo hatsaraina tsara.
Ny vokatry ny fifangaroan'ny fampifangaroana mahery amin'ny fahombiazana:
Lesona maharary ho an'ny mpampiasa ny mividy abrasives mora vidy sy ambany kalitao, izay zato hetsy vitsy noho ny vidin'ny singa. Na izany aza, ny fandaniam-bola nateraky ny fihenan'ny fahombiazan'ny tifitra variraraka dia be lavitra noho io vola io, ary ny fatiantoka ny vola lany vokatry ny androm-piainana ambany dia tokony isaina.
Raha jerena io fironana io, dia namorona karazana abrasives avo lenta vaovao isika - abrasives mifangaro karbaona ambany（Tifitra vy ambany karbaona）- izay afaka manampy bebe kokoa ny orinasa mba hahatratra ny tanjon'ny fihenan'ny vidiny sy ny fampitomboana ny fahombiazany. Manana ekipa serivisy matihanina matihanina izahay, miaraka amina traikefa amin'ny serivisy an-taonany maro, amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny ampahany amin'ny sombin-javatra marokoroko sy ny fanatsarana ny masontsivana fitaovana fitifirana fitifirana, afaka manatsara ny fahombiazan'ny fipoahana fitifirana isika, manampy ireo mpandraharaha hahatsapa ny mahia fitantanana ny fizotran'ny tifitra variraraka, ary avadiho ho tombony ny fatiantoka, ary manampy amin'ny fampihenana ny fandaniana sy hampiakarana ny fahombiazany.
Ho fanampin'ny fanomezana vokatra avo lenta, mifantoka amin'ny fikarohana ny teknolojia fanapoahana tifitra isika, mampiasa ny manam-pahaizana malaza mpitsoka fipoahana an-trano sy any ivelany ho fanohanana ara-teknika an'ny orinasa, manana ekipa serivisy teknika matihanina ary manome an-tapitrisany eny an-toerana serivisy ho an'ny mpanjifa isan-taona, mifantoka amin'ny fanomezana fanohanana ara-teknika sy serivisy ho an'ny fampiharana fipoahana fitifirana, Mifantoha amin'ny fikarohana sy fanatsarana ny teknolojia famokarana mahatsiravina mankany amin'ny teknolojia fampiharana ny vokatra ka hatramin'ny teknolojia fampiasana eo an-toerana.
Aorian'ny karatra fanaovana fikarohana momba ny injeniera eo an-toerana, ampio sy araho ny famaritana eo an-toerana ny mpanjifa;
1. Mametraka sy manatsara ny rafi-pitantanana amin'ny fampidirana sy fampiasana abrasives famaohana tifitra;
2. Fitantanana voadio (maodely nomerika amin'ny fampifangaroana abrasive).
Ny fampifangaroana mahery vaika mahomby dia mitaky fizarana voalanjalanja ny sombintsombiny lehibe sy salantsalany ary kely. Miova tsy tapaka ny fizarana noho ny fahasimbana mahatsiravina ateraky ny fiverimberenan'ny vokatra eo ambonin'ny sehatry ny sangan'asa. Ho an'ny abrasives vetivety dia sarotra ny mitazona ny fandanjalanjana mety noho ny faharavan'izy ireo haingana sy ny fanesorana azy ireo amin'ny rafitra. Ireo fiovaovana amin'ny fizarana habe ireo dia misy fiantraikany mivantana amin'ny famaranana sy famokarana.
Ny fotoana fitifirana fitifirana dia nohafohezina hatramin'ny 90 segondra hatramin'ny 80 segondra, ary ny fahombiazana dia nitombo mihoatra ny 10%;
Betsaka ireo tranonkala notifirina notifirina no tsy matihanina amin'ny fampiasana marokoroko sy ny fanitsiana ny fipoahana, na ny tranokala mbola tsy nahatratra ny fepetra takian'ny fitantanana tsara, ka nahatonga ny fahombiazana na ny tombony azo tamin'ny fanapoahana basy mahery vaika dia tsy nilalao tsara.
Ao amin'ny tontolon'ny tsena mihombo ny fifaninanana dia miahiahy momba ny fihenan'ny vidin'ny rohy famokarana tsirairay koa ireo orinasa mpamokatra. Na dia miahiahy momba ireo akora lehibe sy rohy fototra toy ny akora, fandrendrehana, welding ary vokatra aza isika, dia tokony hifantoka bebe kokoa amin'ny fanaraha-maso ny fanadiovana ny bala. Ny fisafidianana abrasives avo lenta sy matihanina mitifitra fanohanana ara-teknika dia tsy isalasalana fa fanalahidy hanatsarana ny fahombiazan'ny fanadiovana Ny fomba mety indrindra hampihenana ny vidiny, ity fanovana ity dia hampiroborobo ny teknolojia fampiharana an'nytifitra variraraka ary ny fanatsarana ny fibaikoana ny vidiny!
Ankoatra ny tifitra vy ambany karbaona：
TAA koa vokatra tifitra vy,vy grit,fitifirana vy,tariby tapaka vy,grit vy,tariby tapaka vy, haino aman-jery spaonjy maharikoriko,tariby tapaka aluminium, tariby tapaka zinc, tariby tapaka varahina,garnet sns.
TAA's milina fanapoahana & kojakoja fanatobianakoa afaka manampy ny mpanjifa hahatratra miantsena tokana amin'ny fampiharana fipoahana!